Govt to findaway for equal economic opportunities at Chinshwehaw Economic Zone | Myanmar Business Today
HomeBusinessGovt to findaway for equal economic opportunities at Chinshwehaw Economic...
Daw Aung San Suu Kyi said the government of Myanmar will findaway to make both countries have equal economic opportunities when implementing Chinshwehaw Economic Zone, which is located at the Myanmar-China border.
She made that remark duringavideo conference with the chairmen of the special autonomous regions and administrators of the regions and states.
Myanmar and China are also planning to implement China-Myanmar border economic cooperation zones in Muse, Chinshwehaw and Kan Paik Ti and aiming to develop core zone and warehouses as the two countries made an agreement to develop border economic cooperation zones at the border areas during the State Counsellor’s visit to China in 2017 to attend BRI conference.
Chinshwehaw Economic Zone, located in Shan State, is estimated to cost $4 million.
Chinshwehaw Border Trade Post is the second biggest trade post among the four border trade posts at the Myanmar-China border.
It is located near Namhu village in Kunlong Township in northern Shan State,5miles away from Chinshwehaw,3miles from Hopang, and9miles from Kunlong.
ချင်းရွှေဟော်စီးပွားရေးဇုန် ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်စပ် လျဉ်း၍ စီးပွား ရေးလုပ်ဆောင်ရာ တွင် နှစ်နိုင်ငံ ညီမျှရန် လိုအပ်သောကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် တရုတ်နိုင်ငံ နှစ်ဖက်ညီမျှရန် နည်းလမ်းရှာဖွေသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောကြားလိုက်သည်။
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ တိုင်း၊ ဒေသ ဦးစီးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌများ၊ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများအား တွေဆုံစဉ်ပြောကြားလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
မတူကွဲပြားမှုကို စုစည်းပြီး အင်အားအဖြစ် တည်ဆောက်သွားနိုင်ရန် အရေးကြီးပါကြောင်း၊ နယ်စပ်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကိုလည်း အလေးထား ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်းပြောကြားသည်။
မြန်မာ-တရုတ် နယ်စပ်စီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဇုန်များကို မူဆယ်၊ ချင်းရွှေဟော်နှင့် ကန်ပိုက်တီးတို့တွင် တည်ဆောက်ပြီး Core Zone၊ ပို့ကုန်သွင်းကုန် ပစ္စည်းများသိုလှောင်ရန် ကုန်လှောင်ရုံ ဧရိယာများအဖြစ် ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်သွားရန် စိစဉ်လျက်ရှိသည်။
ချင်းရွှေဟော်စီးပွားရေးဇုံသည်ရှမ်းပြည်နယ်တရုတ်နယ်စပ်တွင်ဆောက်လုပ်ရန်စီစဉ်နေပြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄ သန်း ကုန်ကျမည်ဟုခန့်မှန်းထားသည်။
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းက မူဆယ်နှင့်ချင်းရွှေဟော်၊ ကချင်ပြည်နယ်မှ ကန်ပိုက်တီစသောနယ်စပ်စခန်း (၃) ခုကို စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ဇုန်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားသည်။
မြန်မာ-တရုတ်နှစ်နိုင်ငံ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးသဘောတူစာချုပ်ကို ၁၉၉၄ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၁၃ ရက်မှာ ချုပ်ဆိုခဲ့သည်။
မြန်မာ-တရုတ်နယ်စပ်ရှိ ကုန်သွယ်ရေးစခန်း (၄)ခု အနက် ကုန်သွယ် မှုပမာဏ ဒုတိယအများဆုံး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် ချင်းရွှေဟော် ကုန်သွယ်ရေးစခန်းသည် ရှမ်းပြည်နယ် (မြောက်ပိုင်း)၊ ကွမ်းလုံမြို့ နယ်၊ နမ့်ဟူကျေးရွာအနီးမှာ တည်ရှိသည်။
ချင်းရွှေဟော်မြို့နှင့် (၅)မိုင်၊ ဟိုပန်မြို့နှင့် (၃)မိုင်၊ ကွမ်လုံမြို့နှင့် (၉)မိုင် ကွာဝေးပြီး လားရှိုး- ကွမ်းလုံ – ချင်းရွှေဟော်ကားလမ်းမကြီးပေါ်ရှိ ဟိုပန်မြို့သို့ သွားသည့် ကားလမ်းမနှင့်ဆုံရာ နမ့်တိန်ချောင်းကူးတံတားအနီးမှာ တည်ရှိသည်။
ကိုးကန့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသနှင့် ( ၀ ) ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒေသတို့နှင့် ထိစပ်လျက်ရှိသည်။
Previous articleYPS expands to another 15 bus lines
Next articleEU Provides EUR5Million for Land Management